Soo dejisan Zello 1.73 – Vessoft
Soo dejisan Zello
Zello – software ah in ay is dhaafsadaan fariimaha codka. Software waxuu si ay u qoraan fariimo cod iyo u diri isku mar si ay kuwa kale ee isticmaala ama koox dad ah. Zello kuu ogolaanaya in aad ku xidhmaan kanaalada codka dadweynaha kala qaybsan maadooyinka kala duwan. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay abuuraan channels ku xiran ilaaliyo sirta ah ee leh awood ay ku soo rogto xayiraad ee isgaarsiinta cod. Zello ku jira tiro badan oo ah qalab reserved dhawaaqa, wargelinta iyo bandhigay macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Exchange ee fariimaha codka
Dad badan oo channels codka
Abuur channels a xiray
Zello Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Nymgo 5.5.26
العربية, English, Українська, Français... Wise PC 1stAid 1.47